Android Payment dị maka ndị ahịa Openbank | Gam akporosis
Eder Ferreño | | Ngwa gam akporo, Noticias
Gam akporo ugwo bu ugwo ugwo maka ngwa gam akporo. Pathzọ ya na ahịa anaghị adịcha mfe, mana obere obere ọdịiche na-emepe. Na-emezu mmekorita ya na ụlọ akụ gburugburu ụwa. Ihe bụ isi na mgbasa ya. Ọ bụ ezie na ọ dị ogologo oge kemgbe ọkwa akụ akụ ikpeazụ ha ga-ejikọ aka.
N'ikpeazụ, Gam akporo Pay na-ekwuputa ndakọrịta ya na ụlọ akụ ọzọ. Oge nke a bụ ihe Ụlọ akụ, enyemaka nke Santander. Ugbua ejikọtara ya na usoro ịkwụ ụgwọ iji nye ndị ọrụ ya ohere ịme ịkwụ ụgwọ ekwentị ngwa ngwa na n'enweghị nsogbu.
Lọ akụ n'onwe ya ekwuputala ya na weebụsaịtị ya. Yabụ na ọ bụ njikọta ejirilarị ọkwa gọọmentị nke ga-abara ọtụtụ ndị ọrụ uru. N'ụzọ dị otú a, site ugbu a gaa n'ihu ọ ga - ekwe omume maka ndị ahịa Openbank niile jikọta kaadị akwụmụgwọ gị na kaadị akwụmụgwọ na Android Pay. Iji kwụọ ụgwọ site na ekwentị.
Nanị ha ga-ebudata ngwa gam akporo Pay site na Storelọ Ahịa Play. Anyị na-enye njikọ na njedebe nke isiokwu ahụ. Na mgbakwunye, ọ dị mkpa na ngwaọrụ nwere ụdị dị elu karịa Gam akporo 4.4. KitKat, Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ kachanụ nwere igwe na-adịbeghị anya.
Otu uru dị mkpa maka ndị ọrụ bụ na ịkwụ ụgwọ site na ikpo okwu a a naghị ekenye nọmba kaadị ahụ na ntọala nke a na-ekwu. Gam akporo Payment na-elekọta nke iji akara ngosi akaụntụ mebere nke na-edobe data onye ọrụ na nzuzo n'oge niile.
O doro anya na ọ dị mma ịhụ ka ọtụtụ ụlọ akụ na-esonye na ikpo okwu a. Yabụ ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike irite uru ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịkwụ ụgwọ ekwentị. Maka ndị ọrụ Openbank ọ ga-ekwe omume iji gam akporo Pay site taa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Gam akporo Pay ugbu a dakọtara na kaadị Openbank
Zute Oppo A73, ndorodoro nke Xiaomi Mi A1